» नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १
नेपाल स्टारका दाबेदारहरु, भाग १
२९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १३:१७
मकवानपुर, २९ फागुन । नेपालको आफ्नै सिंगिङ रियालिटी शो ‘ वाईवाई नेपाल स्टार’ फागुन २४ गतेदेखि नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण आरम्भ भएको छ । नेपालकै ठूलो भनेर दाबी गरिएको सिंगिङ रियालिटी शो शनिबार राति ९ बजेपछि हेर्न सकिन्छ । यसैबिच नेपाल स्टारको पोखरा अडिसनबाट केही प्रतियोगीहरु दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका छन् । यस भिडियो सिरिजको पहिलो भागमा पोखरा अडिसनबाट दोस्रो राउण्डका लागि छानिएका ३ प्रतियोगीहरु कुरबान अलि खान, दिपेश लामा र निशान बरालका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । अन्य प्रतियोगीहरुका बारेमा जान्न हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोस् ।
१६ वर्षदेखि ४५ वर्ष उमेर समूहका प्रतियोगीहरुले सहभागी हुन पाउने प्रतियोगिताको नेपालका विभिन्न ८ स्थानहरुमा अडिसन भएको थियो । प्रतियोगिताको पहिलो अडिसन बुटवलमा र अन्तिम अडिसन काठमाडौँमा भएको थियो । त्यस्तै धनगढी, सुर्खेत, पोखरा,चितन, बर्दिवास र ईटहरीमा पनि अडिसन भएको थियो । नेपाल स्टारको विजेताले ३५ लाख नगद पुरस्कार सहित अन्य पुरस्कारहरु पाउनेछन् भने फाईनलमा पुगेका थप ३ जनाले ५–५ लाखका दरले पुरस्कार पाउनेछन् । शोमा सुगम संगीतका चर्चित संगितकार आलोक श्री, गायक रामकृष्ण ढकाल र गायिका अञ्जु पन्तले निर्णायक भूमिका निभाएका छन् । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा पहिलो नेपाल स्टार को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।